FBC - Ji’oottan 6 darbanitti hojii naannichatti hojjetaman jalqabbii gaarii dha-obbo Lammaa Magarsaa
Ji’oottan 6 darbanitti hojii naannichatti hojjetaman jalqabbii gaarii dha-obbo Lammaa Magarsaa
Finfinnee Ebila 6,2010 (FBC) Preezdaantiin Naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Caffeedhaa rawwii karoora hojii ji’a 6 dhiyeessaniiru.
Gabaasa isaanii keessatti yaa’iin caffee rakkoo akka biyyatti muudateen dheerachuu isaa eerun,ji’oottan jahan darbanitti naannolee ollaa keenya waliin jireenya hawaasaa bu’uura cimaa irratti ijaaruf hojii hojjetameen Naannoo Amaraa, Kibbaa fi Beenishaangul Gumuz waliin walitti bu’iinsa daangaa darbee darbee umaamu furuuf hojiin guddaa hojjetameera jedhaniiru.
Rakkoo daangaa naannoo Somaalee waliin jiru bu’uura mallatteeffameen hiikuuf sochiirra osoo jirruu, fedhii dhuunfaa isaanii eegsiisuuf warreen socha’an shira xaxaniin namootni naannicha waggaa dheeraaf jiraachaa turan kumni 200 fi kumni 25 fi 728, daangaa irraa ammoo namooti kuma 400 fi kuma 84 fi 994 walumaagalatti kumni 700 fi kumni 10 fi 662 qa’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa’uu ibsaniiru.
Ummaatni naannichaa, sabaa fi sablammootni lammilee buqqa’an deebisanii dhaabuuf miira tokkummaan deeggarsa godhanii jiru.
Namoota rakkoo uuman seeratti dhiyeessuf koreen dhaabbatee ququlleessa kan jiruu fi bu’aan argame hawaasaf ni ibsama jedhaniiru.
Ji’oottan 6 darbanitti damee qonnaan hojii jajjabeessan hojjetamus lafa, qabeenya bishaanii fi teekinooloojii jallisii oomisha dachaan dabalan haalaan itti fayyadamuu irratti hanqinni jiraachuu obbo Lammaan eeranii jiru.
Gama biraan ogeeyyoonni qonnaa deeggarsa ogummaa gahaa gochuu dhabuun rakkoo damicharratti mul’ate yoo ta’u,kan furuuf gara fuula duraatti xiyyeeffannoon hojjetama jedhaniiru.
Damee haqaatin keessattuu abbootii alangaa fi poolisii giddutti walitti hidhamiinsi gaariin hojii haqaa fooyyeessuu danda’u cimaa dhifus, ammas komii hawaasaa damee kanarratti ka’u hambisuuf hojiin bal’aan hafuu himamee jira.
Walumaagalatti gama hawaasummaa,siyaasa fi dinaagdeetin hojiin eegalame gaarii ta’us,gama hooggaansa haaromsaatin kutannoon fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuf haqinni guddaan waan jiruuf, yeroo itti aanuutti hanqina kana furuuf xiyyeeffaannoon hojjetama jedhaniiru preezdaant Lammaan.
Keessattuu qulqullina piroojektootaa, caarraa hojii dargaggoo,barnoota ga’eessotaa gocharratti xiyyeeffatee fi waliin gahiinsa barnoota fedhii addaa qaama midhamtootaa furuuf xiyyeeffannoon hojjenna jedhaniiru.
Oduuwwan Biroo « Muummeen miniistiraa bora qaamolee hawaasaa garaa garaa waliin ni mari’atu jedhame	Caffeen Oromiyaa Muudama Haaraa kenne »